Otu esi agbanwe email Instagram gị | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi agbanwe email Instagram gị
Daniel Terrasa | | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Kwa ụbọchị Instagram Ọ bụ netwọkụ mmekọrịta kacha eji eme ihe n'ụwa. Na ka ewu ewu ya na-abawanye, ka nkwalite na nhọrọ na-adị maka ndị ọrụ ya. Otu n'ime ha bụ nke gbanwee email instagram ma gaa n'ihu dị ka nke a na-anụ ụtọ ihe niile ọ na-enye anyị: na-ebugo akwụkwọ na akụkọ, izipu ozi nzuzo, wdg.
Mkpebi ịgbanwe email nke akaụntụ email jikọtara na Instagram nwere ike ịbụ maka ọtụtụ ihe dị iche iche. Onye ọ bụla nwere nke ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpebi ime ya mgbe ha nwere nsogbu na akaụntụ ahụ ma chọọ ka ha ghara ịtụfu ya kpamkpam. Nsogbu ndị ahụ nwere ike ịbụ ọmụmaatụ n'ihi na anyị na-eche na a hacked akaụntụ anyị ma ọ bụ nanị site echefula paswọọdụ.
Ver también: Otu esi ewepu akaụntụ Instagram ruo mgbe ebighị ebi
Mana ọ dịghị mkpa ịgabiga oke ma mechie akaụntụ ahụ. Ọ dabara nke ọma, mgbanwe ahụ anyị na-ekwu maka ya na mbụ nwere ike ime ngwa ngwa na-enweghị mkpa ịwụnye ngwa mpụga. Iji dozie nsogbu ahụ, na post a, anyị ga-akọwa ihe ndị a:
Otu esi agbanwe email na Instagram.
Gbanwee email na Instagram (na-abanyeghị).
Otu esi agbanwe aha njirimara na Instagram.
1 Gbanwee email na Instagram
2 Gbanwee email na Instagram (na-abanyeghị)
3 Gbanwee aha njirimara na Instagram
Gbanwee email na Instagram
Mgbe ụfọdụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ejirila email ọzọ ma ọ bụ nke anyị anaghị ejikarị maka akaụntụ onye ọrụ Instagram anyị, anyị nwere ike ịhụ onwe anyị na ya. nsogbu mgbe ị na-abanye. Ya mere, ọ dị mma mgbe niile ka ịhazi profaịlụ na akaụntụ email anyị na-emebu, ma ọ bụ jiri akaụntụ email anyị na-eji oge ụfọdụ yana nke anyị nwere ike ịnweta.
Ma ọ bụrụ na emelarị usoro ahụ, ọ dịghị uru mkpesa. Ihe ị ga-eme bụ ịchọ ihe ngwọta. Eziokwu bụ na anyị ga-enwe ike ịgbanwe akaụntụ email Instagram anyị n'ụzọ dị mfe site na webụsaịtị ma ọ bụ ngwa mkpanakaee Ihe ọ bụla ụdị a họọrọ, usoro ị ga-eso na-abụ otu mgbe. Rịba ama na ha:
Nke mbu, anyi aghaghi ime nweta profaịlụ Instagram anyị.
N'ebe ahụ, anyị na-ahọrọ nhọrọ "Dezie profaịlụ". Anyị ga-enwe ike ịhụ na n'okpuru ebe ozi profaịlụ na-egosipụta adreesị ozi-e ugbu a.
Pịa na adreesị ozi-e a ka ị dezie ya.
Emechaa anyị na-ede adreesị ọhụrụ ahụ nke email.
N'ikpeazụ, anyị pịa bọtịnụ ahụ "Ọ DỊ MMA" iji mezue usoro ahụ.
Mgbe emechara mgbanwe ndị a, iji gbanwee akaụntụ Instagram na-adịgide adịgide, anyị ga-enyocha igbe mbata e-mail (adreesị ọhụrụ). A ga-abịa a nkwenye email na njikọ gọọmentị agbakwunyere. Ọ dị mkpa ịga n'ihu na nkwenye iji nweta akaụntụ Instagram anyị ọzọ n'enweghị nsogbu site na email ọhụrụ.
Gbanwee email na Instagram (na-abanyeghị)
Otu esi agbanwe email Instagram gị na-abanyeghị
Mana gịnị na-eme mgbe anyị enweghị ike ịnweta akaụntụ Instagram anyị? Kedu otu anyị nwere ike isi gbanwee mail? Nke a abụghị nsogbu a na-apụghị idozi, ebe ọ bụ na Ọ ga-ekwe omume ịgbanwe adreesị email Instagram na-enweghị nbanye.
Naanị ihe anyị ga-achọ bụ inwe nweta nọmba ekwentị ma ọ bụ email nke edebanyere aha na akaụntụ anyị. Nke a bụ ihe kacha mkpa, n'ihi na ọ bụrụ na anyị enweghịkwa ohere ịnweta ha, anyị nwekwara ike tufuo akaụntụ Instagram anyị kpamkpam. Yabụ na ị ga-edobe ha nke ọma. Mgbe ahụ, anyị ga-agbaso usoro ndị a dị mfe:
Mbụ anyị na-aga na ibe nke Banye Instagram
N'ime ya anyị ga-pịa nhọrọ "Nweta Enyemaka", nke dị n'okpuru bọtịnụ nbanye.
Ọzọ anyị ga-ede email anyị na nọmba ekwentị (ma ọ bụ anyị aha njirimara) jikọtara ya na akaụntụ Instagram kwuru.
Instagram na-enye anyị n'oge a nhọrọ nke ịnweta email, ozi ederede ma ọ bụ ọbụna ohere nke nbanye na Facebook.
Usoro ọ bụla ahọpụtara, naanị ị ga-echere ka Instagram bugharịa anyị na ya gbanwee ibe paswọọdụ.
Ugbua na ibe a, soro ntuziaka a wee wuo na ya peeji nkwenye nke adreesị ozi-e, ebe anyị na-abanye ọhụrụ adreesị email na nọmba ekwentị.
N'ikpeazụ, anyị na-akwado mgbanwe.
Gbanwee aha njirimara na Instagram
Otu usoro ikpeazụ nwere ike ịba uru yana nke metụtara isiokwu nke post: otu esi eme ya gbanwee aha njirimara instagram. Ntị: aha njirimara ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na aha a ga-egosipụta na netwọk mmekọrịta a. Ha bụ ihe abụọ dị iche iche.
Aha njirimara pụrụ iche, enweghị ike ikwugharị ya ọzọ. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịnwe naanị mkpụrụedemede, ọnụọgụ, nkeji ma ọ bụ mesie ike na enweghị ike gafere mkpụrụedemede 30 n'ogologo. Ọ bụ nke egosiri n'elu profaịlụ anyị na ngwa mkpanaka ma ọ bụ na njedebe URL nke profaịlụ anyị na ụdị webụ. Ọ bụ aha pụrụ iche maka profaịlụ ọ bụla.
Usoro iji gbanwee ya, ma site na mkpanaka ma site na kọmputa, bụ ndị a:
Anyị na-enweta ngwa mkpanaka ma ọ bụ webụsaịtị Instagram.
Pịa na akara ngosi nke avatar anyị dị n'akụkụ aka nri ala nke ihuenyo ahụ. Otu a ka anyị si enweta profaịlụ anyị.
Mgbe ahụ, anyị na-ahọrọ nhọrọ "Dezie profaịlụ".
Pịa na "Aha njirimara" ma dee aha ngosi ọhụrụ.
N'ikpeazụ, pịa akara "Ọ DỊ MMA" iji gosi
Anyị na-atụ anya na ozi a gbasara otu esi agbanwe email na Instagram bara uru nye gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Instagram, ị nwere ike ịmasị ọdịnaya nke akụkọ ndị ọzọ:
Otu esi ele ozi Instagram na kọmputa
Yabụ ị nwere ike ịhụ akụkọ Instagram n'ịntanetị
Etu esi biputere na komputa na Instagram
Enweghị m ike bulite foto Instagram, ọ na-ebuli ya. Kedu ihe m nwere ike ime?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Otu esi agbanwe email Instagram gị
Otu esi emeghe faịlụ .cbr na kọmputa gị
Otu esi amachibido ndị ọrụ na-egbu egbu na Twitch